Kanada - Kanada waxay ku bixisaa dhowr inji - TELES RELAY
ACCUEIL » International »Kanada - Kanada waxay socotaa dhowr mitir
Peter de Cruz iyo kooxdiisa ma aysan guuleysan karin Kanada. © KEYSTONE / AP Shirkadda Canadian Press / PAUL CHIASSON
Switzerland ma ciyaari doonto finalka Koobka adduunka ee Lethbridge. Kooxda Peter de Cruz ayaa laga badiyay semi-finalka kulankii ay ka badiyeen Canada ee Kevin Koe ciyaartii 6-5 ka dib dhamaadkii ciyaarta.
Kulan aad u sarreeya oo aad u xoogan, wax walba waxaa lagu ciyaaray dhagaxii ugu dambeeyay, kaas oo ka soo horjeeda Kanadiyaanka mudo dhowr mitir ah. In yar ayaa seegaya fin kama dambeyntii Sweden oo loogu talagalay xubnaha CC-da ee Geneva.
Laakiin wax walbaa kuma dhamaato De Cruz & co. Switzerland ayaa wali ku guuleysatay tartanka seddexaad ee xiriirka ah ee tartanka adduunka. Kulanka 3e wuxuu ka hortagi doonaa Japan Axadda 20h00 (waqtiga Switzerland).
Inta badan maqaalada akhriska
Motocross Payerne, ee Combremont-le-Petit, ma bilaabi doonto horyaalnimada ...
Saddex baabuur ayaa isku dhacey galabnimadii jimcaha.
Migros wuxuu u guuri doonaa xarunta Friborg. Isbedelka iyo horumarinta ...
Cayayaanka leh sunta, beerta Capuchins waa in la nadiifiyaa. A credit ...
Qaybtaas oo kale
Nico Hischier ayaa gaarsiiyey baraha 100 ee NHL, xilli ciyaareedkiisii ​​labaad.
Switzerland ma ciyaari doonto finalka Koobka adduunka ee Lethbridge. Kooxda ...
CP Berne weli waa nool yahay! In Biel, guushii xilli-ciyaareedkii caadiga ahaa ...
Grasshopper ayaa dhibic ka qaadatay Neuchâtel Xamax ee dagaalka si loo ilaaliyo ...
DIB UGU DAMBEEYA!
Dhamaan wararka La Liberté ee warbaahintaada dijital ah laga bilaabo Fr. 9.- / bisha!
Toddobaad kasta, waaxyahay tifaftirkuna wuxuu sharxayaa mawduuc iyada oo loo marayo sumcadda 147 ee taariikhda "La Liberté".
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/le-canada-passe-pour-quelques-centimetres/512275